University of Leipzig - Higher Education an-tany hafa any Alemaina
Firenena : Alemaina
City : Leipzig
fanafohezan-teny : LU
Créé : 1409
mpianatra (eo ho eo.) : 28000
Aza adino ny ifanakalozy hevitra University of Leipzig
Misoratra anarana ao amin'ny Oniversiten'i Leipzig
Oniversiten'i Leipzig dia naorina tao 1409 mahatonga izany ny iray amin'ireo oniversite tranainy indrindra any Alemaina. Izany dia interdisciplinary, iraisam-pirenena feno oniversite.
Ao amin'ny lalana fatra-paniry laza ny fahatongavana ho eoropeanina ambony oniversite sy ny iraisam-pirenena fantatra seza ny fikarohana sy ny fianarana ho an'ny tanora manam-pahaizana Oniversiten'i Leipzig mitaona amin'ny iray isan-karazany be dia be ny foto-kevitra faritra. Crossing faritry ny nentim-paharazana akademika fitsipika, fiaraha-miasa iraisam-pirenena, tambajotra amin'ny oniversite tsy fikarohana toeram-pampianarana sy raharaham-barotra dia tsy fomba amam-panao fotsiny ny Anjerimanontolo ihany koa fa ny fototry ny ny fianarana tsara indrindra.
Oniversiten'i Leipzig ahitana 14 fahaizanareo miaraka amin'ny 128 Institiota. 35,000 olona fikarohana, mampianatra sy mianatra any amin'ny oniversite sy ny mihoatra noho 4,300 olona miasa ao amin'ny Oniversiten'i Leipzig Hospital ny. The oniversite natolotra 136 antokon'ny fianarana ao amin'ny 2009/10 ririnina enim-bolana. 5,686 doctorat kandidà no nanoratra ny anarany, ny Ul (2,439 in fanafody), 631 izay efa voasoratra ao amin'ny 20 voarafitra nahazo diplaoma fanofanana fandaharana (toy ny isaky ny faran'ny 2009). Ny fikarohana mety any Leipzig dia nanamafy ny 20 tsy-oniversite fikarohana andrim-panjakana sy dimy anjerimanontolo hafa.
Amin'ny maha-oniversite tafalatsaka lalina ao amin'ny fomban-drazana, University of Leipzighas foana ny lasa matanjaka kokoa rehefa sarotra vao misondrotra avy amin'ny fiovana. Ny dingana taorian'ny Berlin Wall raiki- 1989 dia nifehy iray saika feno rafitra ny humanities sy ny siansa sosialy raha ny fiainana sy ny siansa dia siansa voajanahary mifanaraka accents vaovao amin'ny fikarohana sy fampianarana. Ny fototry ny fanavaozana ny rafitra sy ny antokony ihany koa ny fianarana miaraka amin'ny fahafahana mba hampiroboroboana interdisciplinary fiaraha-miasa avy amin'ny nanombohan'ny sy manararaotra ny hitsangana-DIPLOMATIKA HANOHANA NY.
Oniversiten'i Leipzig efa napetraka ho amin'ny tsara indrindra ao amin'ny New oniversite Laender sy eo an-tampon'ny 25 tany Alemaina tamin'ny taona fahefatra misesy (ny Shanghai Ranking).
Ny tanànan'i Leipzig dia taonjato maro-barotra taloha foibe ary koa ny manam-pahaizana sy ny kolontsaina foibe izay manana lova amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena, cosmopolitan toe-tsaina sy ny fomban-drazana sy ny fandeferana miezaka. Ny lafiny lehibe Leipzig sy ny University dia ny toetry-of-the-kanto foto-drafitr'asa amin'ny manodidina tsara tarehy ny zava-drehetra izay misy dingana iray monja izy. Ny fanadihadiana ny Vaomiera Eoropeana mampiseho fa Leipzig eo amin'ny telo tanàn-dehibe any Eoropa izay fiainam-mendrika ny hiainana raha ny New York Times dia miantso azy io iray amin'ireo folo-tampon'ny toerana.
Faculty ny Teolojia
Faculty ny Lalàna
Faculty ny tantara, Art ary Oriental Fianarana
Faculty ny Philology
Faculty ny Siansa Sosialy sy filozofia
Faculty ny Toekarena sy ny Management (anisan'izany ny Civil Engineering)
Faculty ny Sports Science
Faculty ny Medicine (amin'ny University Hopitaly)
Faculty matematika sy ny solosaina Science
Faculty ny Biosciences, Pharmacy sy ny Psychology
Faculty fizika sy ny Tany Science
Faculty simia sy Mineralogy
Faculty ny Veterinary Medicine
Universität Leipzig dia naorin'i tompo sy ny manam-pahaizana avy any Prague
Leipzig Adihevitra amin'ny Pleissenburg Castle. Ny fifandirana eo amin'ny teolojianina ortodoksa Johannes Eck sy ny fanavaozana Luther, Karlstadt sy Melanchthon
Manamarika ny nascent fiatoana eo amin'ny Roma sy ny Loteranina
Ny fametrahana ny Loteranina Fanavaozana in Albertine Saxony, indrindra taorian'ny 1543, vanim-potoana vaovao ny tantaram-oniversite manomboka. Ny asan'ny Rector Caspar Borner hajaina e Joachim Camerarius maha-olombelona ao amin'ny
vonona taona no hiheverany ny refounding ny oniversite
Fametrahana ny oniversite fitehirizam-boky, indrindra fa avy any monastic Holdings
Duke Moritz ny Saxony famindrana ny teo aloha monasitera Dominikana amin'ny oniversite izay no anarana ny "Collegium Paulinum." Izany miaraka amin'ny fanohanana ara-nofo hafa mahatonga Leipzig iray amin'ireo oniversite manan-karena indrindra ao amin'ny Old Reich
Ny gazety manam-pahaizana voalohany tany Alemaina, Acta erudita, dia nivoaka tao amin'ny
varotra ara-drariny-tanàna. Maro amin'izy io tatỳ aoriana Leipzig hanamafy orina ny
toerana toy ny boky-varotra renivohitr'i Eoropa Afovoany
Ny voalohany ho an'ny mpampianatra feno fiterahana, Johann Christoph Gottfried Jörg, lasa
talen'ny sekoly iray fanaterana ("Trier Institute") izay taty aoriana dia manangana ho ao an-oniversite gynecological hopitaly
Ny Institute of andrana Psychology - ny voalohany eto an-tany - dia misokatra ny Wilhelm Wundt
Fitokanana ny vaovao natao ny Arwed Augusteum Rossbach
Ny vehivavy dia niaiky ihany tamin'ny farany toy ny mpianatra - somary tara fampandrosoana any Leipzig - rehefa mahazo fanaraha-maso toy ny kilasy toy ny tany am-boalohany 1870
Voalohany seza ny atidoha fikarohana tany Alemaina
Heisenberg dia nahazo ny 1932 Loka Nobel in Fizika (nanambara in 1933), indrindra fa ny "famoronana atsangana hitondra Milina sy ny fampiharana"
Ny ratsy fated fandaminana indray ny oniversite vatana ho rafitra ny tsy hivadika ny Antoko Nazia jadona paralyzes maimaim-poana fisainana sy ny fiainana ara-tsaina. mpampianatra, mpianatra sy ireo mpiasa voaroaka amin'ny oniversite, enjehina, naiditra am-ponja na novonoina noho ny antony ara-politika na ara-poko. Ny ady lehibe faharoa dia mitondra faobe ny fahafatesana sy ny fandringanana kosa ho Leipzig. Amby enimpolo isan-jaton'ny ny oniversite
rava, mpampianatra sy mpianatra ho very eny amin'ny habakabaka ady na eo amin'ny anoloana, ary Leipzig very ny fifandraisana iraisam-pirenena. Out of 103 trano oniversite ihany 16 dia tsy simba any amin'ny faran'ny ny ady. Fito amby valo-polo no rava tanteraka na tsy azo ampiasaina intsony.
Ny anjerimanontolo dia hisokatra indray 1946 sinema amin'ny teo aloha "Capitol"
Amin'ny maha-mariky ny fironana ideolojika vaovao ny siansa sy ny vatsim in
ny RDA, ny fitondrana antoko Sed renames Universität Leipzig "Karl Marx-Universität-mifanohitra amin'ny fomban-drazana, ny anjerimanontolo manana napetraka fanendrena avy any ambony
Ny Augusteum ary - rehefa tafavoaka velona simba tanteraka ny ady - St. Paoly oniversite fiangonana dia nandrava ny baiko avy amin'ny fitondrana Sed. Ny Filan-kevitry ny Leipzig City bato mba hanorina indray ny oniversite. Ny fifaninanana dia nanambara ao amin'ny lohataonan'ny 1968, kanefa tsy dia nahazo loka voalohany. Native Leipziger sy ny filoham-panjakana Walter Ulbricht (1893-1973) miandany amin'i nanangana singa fototra avy ao amin'ny fahatelo-toerana nanaovana ny Gerhard Henselmann. The oniversite highrise, rectorate, samy maka izay tiany, seminera sy ny lahateny trano dia vita avy teo antenatenan'ireo taona 1970
Fivoarana ara-politika sy ny hetsi-panoherana an-dalambe ho an'ny more 1989 fahalalahana sy zo sivily dia nanatevin-daharana any Leipzig maro oniversite mpikambana. Fitakiana ara-politika sy ny adihevitra ela dia hitsangana ao amin'ny oniversite. Fanavaozana filankevitry ny hihaona sy hiresaka momba ny ho avy oniversite fironana. Mpianatra Nahita fomba demokratika firaisana mpianatra ara-dalàna
Taorian'ny fianjeran'i ny Wall sy alemà fampihavanana, ny anjerimanontolo indray mandeha indray ny mieritreritra ny fanendrena nentim-paharazana: University of Leipzig
Ny lanonana Desambra 2 manamarika ny refounding ny fikambanana intsony ny faha-3 Fanavaozana ny Fampianarana Ambony 1968 ary ny anjerimanontolo Niverina ny mahazatra-misaina sy ny firafitry ny fikambanana. Miisa 14 fahaizanareo dia nanorina ny 1994, ny sasany izay tsy nisy tao amin'ny oniversite eo anatrehan'i. ny mendri-kaja
Faculty Fambolena dia mihidy, na izany aza
The Free State ny Saxony, amin'ny fiarahamiasa amin'ny oniversite sy ny City ny Leipzig, manambara ny EU manerana fifaninanana mba redesign ny toeram-pianarana an-drenivohitra
amin'ny Augustusplatz. Ny famolavolana ny mpanao mari-trano behet + bondzio from Münster no nifidy ny mpitsara. Ao amin'ny iray hafa Eoropa manerana an'ireo trano fifaninanana mba hanorina indray ny oniversite efitrano sy ny fiangonana, ny fifanarahana dia nahazo ny holandey ny fi Rm erick manana sur egeraat mifandray mpanao mari-trano, Rotterdam. Ny asa fanorenana ny toeram-pianarana anjerimanontolo vaovao manomboka ny volana Jolay 2005 raha ny fototra no nametraka vato ho samy maka izay tiany ny vaovao. Ny dingana voalohany amin'ny fanorenana vaovao dia ahitana ny samy maka izay tiany sy ny fanorenana indray ny lahateny efitrano taloha. Tamin'ny volana Oktobra 2008, ny topping-avy lanonana ho an'ny Paulinum no ankalazaina sy ny institiota trano amin'ny Grimmaische Strasse dia natolotra ny oniversite. Campus tsikelikely trano dia vonona ny lohataona pampiasana ho an'ny enim-bolana ny 2009. Ny lanonana ofisialy nanamarika ny oniversite 600 taona misy mitranga amin'ny
Paulinum Desambra 2, 2009
600-taona tsingerintaona fankalazana sy ny fanokafana ny toeram-pianarana vaovao ao amin'ny
Ianao ve mila ifanakalozy hevitra University of Leipzig ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Oniversiten'i Leipzig tamin'ny Map
Photos: University of Leipzig ofisialy Facebook
University of Leipzig Hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny Oniversiten'i Leipzig.
Other oniversite any Alemaina
Oniversiten'i Duisburg-Essen Essen
University of Bayreuth Bayreuth
University of Erlangen Nuremberg Erlangen
University of Hanovre Hanovre